1. Etu na-egbochi ịrụ ọrụ nke ọma
A na-eme ka uzuzu kpuchie ihe dị n'ime ya nke ọma site na iji ya kpuchie ezigbo uzuzu, ọkachasị uzuzu a na-achọsi ike n'okpuru 2.5 microns. N'ihi na umi a nwere ike ịbanye na alveoli, ahụike mmadụ kpatara ihe kachasị emetụta ya. Ndị na-ekulata ikuku, nke a na-eji carbon carbon fiber na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ akwa a na-adịghị edozi, na-agafe ụmụ irighiri ahịhịa ndị na-adịchaghị mma.
2. Ogo nke ike
Ihe nkpuchi ihu nwere ike igbochi ikuku site na nkpuchi na oghere ihu mmadu n’enweghi ahuhu ya site na ihe omuma nke oru a. Ikuku, dị ka mmiri, na-aga ebe enwere ntakịrị nguzogide. Mgbe udi nkpuchi ahụ adịghị nso na ihu, ihe ndị dị ize ndụ nke ikuku ga-abanye n'ime oghere iku ume nke onye ahụ. Yabụ, ọbụlagodi ma ịhọrọ nke nkpuchi kachasị mma. Ọ naghị echebe ahụ ike gị. Ọtụtụ usoro iwu mba ọzọ na-enye iwu na ndị ọrụ kwesịrị ịnwale ike nke mkpuchi. Ebumnuche bụ iji hụ na ndị ọrụ họrọ masks kwesịrị ekwesị ma yiri ha dịka usoro ziri ezi.
3. Yiri iru ala
N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-enwe obi ụtọ na-esi ọnwụ ka ha yie ha n'ebe ọrụ ma melite arụmọrụ ọrụ ha. Ugbu a, masks mmezi nke ndị mba ọzọ, ọ dịghị mkpa ịsacha ma ọ bụ dochie akụkụ, mgbe uzuzu kpochiri ma ọ bụ gbajiri ihe a tụfuru ekpofu, ka ị wee hụ na ịdị ọcha nke masks na ndị ọrụ nweere onwe ha na mmezi nke ihe mgbe niile. Na otutu masks na-agbaso ụdị njiri, nwere ike ime ka njiri dị na ihu ihu ugbua ma nwee ike idobe ụfọdụ ohere na ebe dị egwu, na-eyi nke ọma.